Dowladda Faransiiska oo ku dhawaaqday in Ciidamadeeda kala bixi doonto dalka Afrikada Dhexe. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dowladda Faransiiska oo ku dhawaaqday in Ciidamadeeda kala bixi doonto dalka Afrikada Dhexe.
On Mar 31, 2016 1,120 0
Dowladda Faransiiska oo sanadkii 2013 duullaan ka dhan ah dadka Muslimiinta ku qaaday Jamhuuriyadda Afrikada dhexe ee lagu xasuuqayo dadka Muslimiiinta ayaa si toos ah u iclaamisay iney Ciidankeedu kala bixi doonto dalkaas.
Wasiirka Gaashandhiga Xukuumadda Faransiiska Jean Yeves ayaa isagoo ku sugan magaalada Bangi caasimadda Jamhuuriyadda Afrikada dhexe waxa uu sheegay iney soo afjari doonaan sanadkan 2016 howlgallada ay Ciidankiisu ka wadeen Jamhuuriyadda Afrikada dhexe.
Isagoo marin habaabinaya dadka dhageysanayay kalimadiisa waxa uu sheegay in markii Ciidamadoodu kusoo duulayeen Afrikada dhexe uu dalkaas ka jiray dhibaato iyo dagaallo sokeey waa sida uu hadalka u dhigaye, islamarkaana ay iyagu arinkaas ka hortageen.
Dowladda Faransiiska ayaa haatan waxay wadaa qorshe ay ku dhisayso Xukuumad ay hogaamiyaan Kirishtaanka dalka Afrikada dhexe, waxaana wasiirka dagaalka Faransiiska iyo wafdi uu hogaaminayo ay ku sugan yihiin haatan caasimadda Afrikada dhexe ee Bangi.
Ciidamada Faransiiska ayaa tan iyo sanadkii 2013 waxay dalka Afrikad dhexe ka geysteen Tacaddiyo iyo xadgudub ka dhan ah dadka Muslimiinta, iyagoona si toos ah iyo si dadbanba ula safnaa maleeshiyaadka Nasaarada ee gumaadaya dadka Muslimiinta.
Allah u naxariistee Sheekh Mukhtaar Cabdi Raxmaan Abuu Zubeyr ayaa aad loogu xusuustaa sida qiirada leh ee uu uga hadli jiray Qadiyadda Muslimiinta Afrikada dhexe, waxaana Xarakada Shabaabul Mujaahidiin weerar ay ka fulisay dalka Jabuuti oo lagu beegsaday Saraakiil Faransiis ah ku sheegtay in looug aarugayo Muslimiinta Afrikada dhexe.